12 Ngwa ga-enwerịrị ọdịda - Ejiji
12 Ngwa ga-enwerịrị ọdịda
Gbalịa tinye mgbakwunye ndị a dị oke egwu, ị ga-adịkwa ka ị nwetara ndetu ejiji ọdịda.
Cathy Crawford na Josephine Schiele 1/12
Ụdị ihe eji ada ada: akpa nwanyị
Ịzụta akpa ọhụrụ n'oge a? Mee ka ọ na-enwu enwu, nke ejiri aka rụọ, na ụdị okpokolo anya-dị n'ụdị ọ bụla yana ọ dị mfe iji ya na-anọpụ iche. Anyị hụrụ akpụkpọ ahụ pụrụ iche na agba ụtọ nke ụdị ntinye ego a.
Dolce & Gabbana, $ 2,995, luisaviaroma.com
Cathy Crawford na Josephine Schiele 2/12
Ụdị ihe eji ada ada: akpa akpa akpa
Akpa aka ndị a na-enweghị aka (chee maka ya ... mmanya n'otu aka, ekwentị n'aka nke ọzọ) na-ebuli uwe ọ bụla elu.
anaghị ahụ site na tankị ọcha
Site n'elu: Kenneth Cole New York, $ 198, kennethcole.com ; Michael Michael Kors, $ 268, cusp.com; Chanel, $ 5,100, họrọ ụlọ ahịa Chanel, 800-550-0005
Cathy Crawford na Josephine Schiele 3/12
Ọdịdị ngwa ada ada: Tortoiseshell Aviators
Anyị echeghị na ndo egbe Top Gun nwere ike nweta igwe nju oyi ọ bụla, mana site na anya m gbara okirikiri na ụkpụrụ na -atọ ụtọ nke ụwa niile, ha mere ya.
Prada, $ 310, macys.com
Ụdị ihe eji ada ada: Akpụkpọ ụkwụ Dragonfly
Ụkwụ ikiri ụkwụ na -adị ebe niile n'oge ọdịda a. Onye na -emepụta ihe bụ Tabitha Simmons na -ekwu na mmụọ nsọ ya sitere na nku nke ọdụdụ mmiri, nke na -esighi ike na nke nwanyị mana siri ike na agba. Cheedị echiche otú ha ga -esi mara mma na ajị isi awọ ọ bụla.
Site n'aka ekpe: Tabitha Simmons, $ 895, tabithasimmons.com ; BCBGeneration, $ 89, bcbgeneration.com ; Tory Burch, $ 425, 212-510-8371
Cathy Crawford na Josephine Schiele 5/12
Ụdị ihe eji ada ada: Ọla okwu
Na Lanvin, onye nrụpụta Alber Elbaz nyere okwu okwu kpochapụwo ihe ịchọ mma nke ukwuu ('Ịhụnanya' dị n'aka ekpe na -agbatị eriri olu ruo n'olu). Zụọ ahịa ile anya -ma ọ bụ gbajie olu olu gị.
Lanvin, $ 995, Lanvin, NYC, 646-439-0380
Cathy Crawford na Josephine Schiele 6/12
Ụdị ihe eji ada ada: ihe ọ bụla kpụ ọkụ n'ọnụ
Kedu onye na -ekwu na ejiji kwesịrị ịdị oke mkpa? N'agbata ugegbe na-achaghị acha na pom-poms ikiri ụkwụ ụkwụ na-acha pinki pinki, anyị na-ahụ ihe ọchị ndị mmebe n'anya ụbọchị ndị a. Tinye ụfọdụ fluff (ọnụ ọgụgụ faux!)
Brian Atwood, $ 1,295, 212- 415-4739
Ọdịdị ngwa ada ada: ngwa mmakọ
Họrọ otu n'ime agba kụrụ n'oge, dị ka cobalt (dị ka Reed Krakoff gosiri) ma ọ bụ caramel, ma rapara na ya - site n'isi ruo akpa aka ruo mkpịsị ụkwụ.
Cathy Crawford na Josephine Schiele 8/12
Ọdịdị ngwa ada ada: mgbakwunye Tartan
Enwere mwakpo ndị Scottish na -eme - ọ kachasị mma na obere doses.
Akpa Stella McCartney, $ 1,680, 212-255-1556; Ulo elu nke ShoeDazzle, $ 36, shoedazzle.com
Cathy Crawford na Josephine Schiele 9/12
Ụdị ihe eji ada ada: Akpụkpọ ụkwụ Lug-Sole
Oh, hey ebe ahụ, 1994. nyiwe ndị a na-azọdo ụkwụ jiri ụzọ nkwalite Stella McCartney na Prada jiri nkwalite afọ 2013 gbadaa: ikiri ụkwụ dị gịrịgịrị.
Site n'elu: Rag & Ọkpụkpụ, $ 695, ụdị yiri ya dị na ụlọ ahịa Rag & Bone họrọ; Jennifer Lopez, $ 80, kohls.com
Cathy Crawford na Josephine Schiele 10/12
Ọdịdị ngwa ada ada: ngwongwo anụmanụ
Agụ bụ nnọpụiche ọhụrụ. Kpọrọ ihe, yie ya ọnyá, neon, ifuru, ihe ọ bụla! Akụkụ kacha mma: Ọ bụ nlegharị anya anaghị adị oke ọnụ.
Ndị na -agba snịịka, $ 60, gap.com; Aldo ipigide, $ 35, aldoshoes.com
Cathy Crawford na Josephine Schiele 11/12
Ụdị ihe eji ada ada: A Carryall mara mma
Anyị hụrụ obere ihe n'anya, mana ụbọchị ole ka ị ga -ebugharị ime ụlọ gị.Eji akpụkpọ anụ mee ya, werekwa aka dị elu mee ka ọdịdị ahụ dara ada dị ọcha, ndị a abụghị akpa mgbatị ahụ.
Chloe, $ 2,250, net-a-porter.com
Cathy Crawford na Josephine Schiele 12/12
Ụdị ihe eji ada ada: Crystal Hats
Hapụ ya na J.Crew, nna ukwu nke ejikọtara ọnụ na -ejighị n'aka, itinye kristal na okpu baseball. Ọ bụ ọkaibe dị ala.
J.Crew, $ 125, jcrew.com
Ihe ịrịba ama 5 ị nwere ike ịda mba
Nke a bụ ka Glamor si kpuchie nha anya ụmụ nwanyị n'afọ ndị 1970
Otu esi ese foto Selfie, site n'aka Kendall na Kylie Jenner
The Ultimate Ikea Hack: Bemz na -emepụta Slipcovers omenala maka arịa ụlọ Ikea
40 + Oge Okooko Osisi Ikwesiri Inweta N’ubi Gị
kedu ka m ga -esi were egbugbere ọnụ
uwe mmanya maka oriri agbamakwụkwọ
edozi isi edozi isi maka ntutu ojii 2020